Shina mitondra angular Steel Grit orinasa sy mpanamboatra | Feng Erda
Bearing Angular Steel Grit dia vita amin'ny brokened Bearing plate. Ny vy mitondra dia manana Cr, Mo singa tsy dia fahita firy, manana fitoniana tsara ao anaty rafitra izy. Ny fitondra vy anging vy dia manana fahombiazana avo lenta, fanoherana mitafy ambony, ny fiainany miasa dia 2,5 fotoana raha mbola grit vy mahery sy karbôna ambany
Model / Size:G12-G150 Φ0.1mm-2.8mm
Bearing Angular Steel Grit dia vita amin'ny brokened Bearing plate. Ny vy mitondra dia manana Cr, Mo singa tsy dia fahita firy, manana fitoniana tsara ao anaty rafitra izy. Ny fitondra vy anging vy dia manana fahombiazana avo lenta, fanoherana mitafy ambony, ny fiainany miasa dia 2,5 fotoana raha mbola grit vy be karbaona sy grit vy ambany.
Sorbite voafitaka homogenika
Endrika bika, zoro betsaka, zoro maranitra
Tombony sy fampiharana
① Ny fitaterana grit vy dia miorina amin'ny fitaovana, tsara amin'ny endriny, ary misy ny singa tsy fahita Cr Mo, hamafin'ny havoana, mety indrindra amin'ny fanamboarana sambo sy fantsom-piaramanidina ary fitaovana lehibe hafa.
②Ny fizotry ny famokarana grit vy dia tsy mitovy, ny fizotry ny famokarana dia tsy manova ny firafitry ny akora sy ny toetra mampiavaka azy.
③ Izy io dia ampiasaina manokana hanapahana granite ary afaka manampy ny mpanjifa hahomby haingana sy haingana kokoa noho ny fanapahana noho ny sisiny maranitra, ny haben'ny fanamiana ary ny fanoherana anaovan'akanjo tsara.
④Ny fitotoana vy grit dia tsy mora vaky, vovoka kely, afaka manatsara ny tontolon'ny fiasan'ny famafana fasika, mampihena ny enta-mavesatra amin'ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny fahasalamana.
⑤Ny grit vy vaovao dia vita amin'ny vy vy tsy tapaka izay mitazona ny FANJAKANA FANAMPIANA, fa tsy FANJAKANA. Miaraka amin'ny fizotran'ny matihanina amin'ny famonoana, fanorotoroana, sieving ary fitsaboana hafanana manokana, ny grit toy izany dia mampiseho endrika zoro misy endrika fanoherana mahery vaika sy fihenan'ny fiatraikany. Mandritra ny fampiasana azy dia voaporofo fa ny endrin'ny zorony amin'ny grit dia ho lasa arc, izay mety amin'ny fidinana oksizenina, ny fanadiovana ny tany ary ny fanodinana ny tany, mba hanatsarana tsara ny fahombiazan'ny fipoahana sy ny kalitaon'ny coating, ary hampihena ny angovo kinetika ny loko, ny fihinana mahasosotra sy ny sisa, ary koa mba hanitatra ny androm-piainan'ny akanjo.
Previous: Fitotoana vy Shot
Manaraka: Tifitra alim-bika / tapaka tariby
Grit Stainless vy
Famafazana vy mahery
Mpamatsy vy mamono vy
Grit avo zoro karbonika avo
Zinc shot / Zinc notapahana tariby
Tifitra alim-bika / tapaka tariby
Tifitra varahina mena / voatifitra tariby varahina